अण्डा कसरी पकाउने र कति खाने ? - Everest Dainik - News from Nepal
अण्डा कसरी पकाउने र कति खाने ?
हामी दैनिकजसो स्वस्थ स्वास्थ्यका लागि अण्डा खानाले फाइदा हुन्छ भन्ने मानिन्छ ।
के तपाईहरुलाई थाहा छ, एकदिनमा कति वटासम्म अण्डा खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ ? अनि अण्डा पकाउने सही तरिका र अनि धेरै अण्डाले खानाले हानी गर्न सक्छ भन्ने तपाईलाई थाहा छ ?
चिकित्सकहरु पोषक तत्वले भरपूर भएकाले खानामा अण्डा सामेल गर्न सल्लाह दिन्छन् । यो भिटामिन ए, बी, डी र बी १२ का अलावा लुटीन र जीएजेन्थिनजस्ता पोषक तत्वले भरपूर हुन्छ । आँखाका लागि पनि अण्डा सेवन उपयोगी मानिन्छ । बेलायतका डाइटिसियन डा. फ्र्यांकी फिलिप्सका अनुसार एक दिनमा एक या दुइ अण्डामात्र खान सकिन्छ । उनी भन्छन्, ‘धेरै अण्डा खाँदा डराउनुपर्दैन । तर, के ध्यान दिनुस् भने कुनै पनि खानेकुरा बढी खानु भनेको अरु खानेकुुराबाट प्राप्त हुने पोषकतत्वबाट वन्चित रहनु हो ।’
याे पनि पढ्नुस एउटै फार्मबाट दैनिक एक लाख ४० हजार अन्डा उत्पादन
मुटुसम्बन्धी बेलायती संस्थाका अनुसार एउटा अण्डामा ४।६ ग्राम अर्थात् एक चम्चा बोसो हुन्छ । तर यसको एक चौथाई भागमात्र स्याचुरेटेड हुन्छ । यसको मतलब अण्डाकै कारण शरीरको कोलेस्टेरोलमा ठूलो असर पर्दैन भन्ने हो । तर अण्डासँग मख्खन या क्रिम खानाले अर्को नतिजा निस्कन्छ ।
याे पनि पढ्नुस स्वस्थ स्वास्थ्यका लागि फर्सी खानुको यस्ता छन् फाइदा !
याे पनि पढ्नुस अण्डाको मूल्य बढ्यो
केही व्यक्तिलाई अण्डाको एलर्जी हुन्छ । खासगरी ५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई यस्तो समस्या हुन्छ ।
अण्डाका एलर्जीका केही लक्षण
डा फिलिप्स भन्छन्, ‘एलर्जी नभएका व्यक्तिले कुनै पनि प्रकारले अण्डा खान सक्छन् । तर अण्डा कसरी बनाउने भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
ट्याग्स: egg, Good Health